ट्रम्प प्रशासनकाे मध्यस्थतामा युएई-बहराइन -इजरायल ऐतिहासिक सम्झाैता | CNNepal
ट्रम्प प्रशासनकाे मध्यस्थतामा युएई-बहराइन -इजरायल ऐतिहासिक सम्झाैता
टेक्सास अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू मंगलबार संयुक्त अरब दुवई र बहराइनका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसमेत व्हाइट हाउसमा मिलेर इजरायल र दुई अरब देशहरूबीच ऐतिहासिक सामान्यीकरण सम्झौताका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन ।
ट्रम्पले उक्त अवसरको स्वागत गर्दै अब्राहम अकार्ड्समा हस्ताक्षर गरेका छन । उक्त सम्झाैताले “इतिहासको मोड बदल्छ” र “नयाँ मध्य पूर्वको बिहान” को संकेतकाे सुरुवात भएकाे दाबी गरेका छन ।
ट्रम्पले भने, “यी सम्झौताहरू मिलेर सम्पूर्ण क्षेत्रभरि विस्तृत शान्तिको आधार हुनेछन्, । जुन कुरा कसैलाई पनि सम्भव थिएन जस्तो लाग्छ । यो दिन र युगमा पक्कै पनि होईन । ट्रम्पले भने – “यी सम्झौताहरूले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूले विगतको असफल दृष्टिकोणबाट स्वतन्त्र भईरहेका छन् भनेर प्रमाणित गर्दछ। आजको हस्ताक्षरले इतिहासलाई नयाँ मार्गमा तय गर्छ । र त्यहाँ धेरै देशहरू पनि हुनेछन् जसले ती महान नेताहरूलाई पछ्याउनेछन्।नेतान्याहूले त्यस दिनलाई “इतिहासको अभिन्न अंग, शान्तिको नयाँ बिहान” को रूपमा वर्णन गरे।
पछिल्लो पटक सन १९९४ मा वाशिंगटनमा त्यस्तो समारोह भएको थियो, जब राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले इजरायली प्रधानमन्त्री यित्जक राविन र जोर्डिनका राजा हुसेनले एक घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरे जुन महिनौं पछि शान्ति सम्झौताको मार्ग प्रशस्त भयो।
ट्रम्पका लागि, समय महत्वपूर्ण थियो। दुई महिना भन्दा पनि कम समय अगाडि चुनावमा उनी चुनावको क्रममा थिए। इजरायल, युएई र बहराइनबीच सामान्यीकरण सम्झौताहरु प्रमुख विदेश नीतिहरू हुन्, चाहे क्षेत्रले बिस्तारै यी सम्बन्धहरूतर्फ अघि बढिरहेको छ चाहे व्हाइट हाउसले कसलाई कब्जा गर्‍यो।
हामी यहाँ कसरी पुग्यौं?
वर्षौंको लागि, इजरायलले सुन्नी खाडी मुलुकका धेरै देशहरूसँग गोप्य सम्बन्ध राखेको छ र पछिल्ला वर्षहरूमा इरानको बिरूद्ध एक आपसी डे फैक्टो गठबन्धनले प्रेरित गरेको छ। तैपनि, यी सम्बन्धहरूले इरान आणविक सम्झौताको पूर्व-मिति बनेको छ जुन केही अवस्थामा दशक भन्दा बढीमा खाडी राष्ट्रहरूले इजरायलको उच्च प्रविधिक दृश्यको फाइदा लिन खोजेका थिए र इजरायलले अशान्ति पुर्‍याएको मध्यपूर्वमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न खोजेको थियो।
पर्दा पछाडि रहेका यी सम्बन्धहरूका बीच संयुक्त अरब अमीरात पनि हो, यी दुई राज्यहरूको बिस्तार बढ्दै गएको सार्वजनिक सम्बन्धको सामान्य उदाहरणहरू। २०१५ को अन्ततिर, इजरायलले अबू धाबीमा अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय उर्जा एजेन्सीको लागि कूटनीतिक स्तर मिशन खोले। २०१८ मा, तत्कालीन संस्कृति मन्त्री मिरी रेगेभले इमिरेट्समा भएको जुडो प्रतियोगितामा इजरायली स्वर्ण पदकको टाउकोमा भव्य मस्जिदको राज्य भ्रमण गरे। इजरायललाई एक्सपो २०२० दुबईमा पनि आमन्त्रित गरिएको थियो जुन विश्व एक्सपो हो जुन पछि कोरोनाभाइरस महामारीको कारणले ढिला भयो।
युएईजस्तै बहराइनले पनि इजरायलसँग पछाडि गोप्य सम्बन्ध राखेको थियो। थप रूपमा, बहरेनको सानो तर दिगो यहूदी समुदाय रहेको छ, यसको एक सदस्यले २००८-२०१३ सम्म संयुक्त राज्यमा देशको राजदूतको रूपमा सेवा गरिरहेको छ। सानो खाडी राज्यले मध्यपूर्व शान्तिका लागि व्हाइट हाउसको योजनाको आर्थिक अंशको अनावरण पनि गर्‍यो, जसले अमेरिका र त्यसपछिको इजरायलसँग सम्बन्ध गाँस्नको इच्छुकतालाई संकेत गरेको थियो। इजरायली – प्यालेस्टाइन द्वन्द्व सम्भव देखिन्छ।
महत्वपूर्ण रूपमा युएई र बहरिन पनि संरा अमेरिकाका घनिष्ट सहयोगीहरू छन्, प्रत्येक देशले महत्वपूर्ण अमेरिकी सेनाको उपस्थितिको साथ। युएस एयरफोर्सले एफ ३५ लड़ाकू जेट विमानहरू अबू धाबीको एक हवाई अड्डामा खटाएको छ, जबकि नौसेनाको पाँचौं फ्लीट र केन्द्रीय कमाण्ड बहराइनमा रहेको छ। त्यो सैन्य उपस्थितिले युएई र बहरिनका नेताहरूलाई अमेरिकाको नजिक र इरान विरोधी गठबन्धनका कारण इजरायलको नजिक पुगेको छ।
इजरायल, युएई र बहरिनले यसबाट के पाउँछन्?
बहराइनका राजा हमद बिन ईसा अल-खलीफाको व्यक्तिगत सल्लाहकारका रूपमा काम गर्ने एक प्रसिद्ध अमेरिकी रब्बीले मलाई एकपटक भनेका थिए कि खाडी अरब राज्यहरूका लागि वाशिंगटनको बाटो यरूशलेम भएर बित्छ। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा, यदि यी राज्यहरू राष्ट्रपति ट्रम्प र व्हाइट हाउसको नजिक हुन चाहन्थे भने इजरायली नेताहरूसँग सम्बन्ध बनाउने त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने निश्चित मार्ग थियो।
युएईले स्पष्ट गर्‍यो कि इजरायलसँगको सामान्यीकरण सम्झौताको एक फाइदा यो हो कि संयुक्त राज्यबाट एफ ३५ प्राप्त गर्न सजिलो हुनुपर्दछ । यो दृष्टिकोण ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकार जारेड कुसनरले पनि साझा गरे। यसले इमिरेटिसलाई युएस सूचीको अन्तिम लडाकु जेट प्रदान गर्ने छ र इजरायलको अपवाद बाहेक यस क्षेत्रको कुनै पनि सेनामा महत्वपूर्ण धार पुर्‍याउने छ।
युएईले पनि इजरायलको पश्चिमी किनारका केही अंशहरू कब्जा गरेको निलम्बन सुनिश्चित गर्‍यो र यो कुरा स्पष्ट गर्‍यो कि सम्बन्धहरू सामान्य बनाउनका लागि यो उसको अवस्था हो। यद्यपि यो निलम्बन कति लामो हुन्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट भए पनि युएइका लागि यसले दुई देशीय समाधानको सम्भावनालाई जीवितै राख्यो, जसको भनाइमा इजरायली-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको सम्भावित अन्त्य हो।
मंगलबार ह्वाइट हाउसमा बोल्दै दुवइका विदेशमन्त्री शेख अब्दुल्ला बिन जायदले प्यालेस्टाइन क्षेत्रको योजनाबद्ध कब्जालाई रोकिरहेकोमा इजरायललाई धन्यवाद दिए।
बहराइनले के सामान्य लक्ष्यीकरण सम्झौताबाट प्राप्त गर्न चाहेको विशेष लक्ष्यहरू कम स्पष्ट छ। युएई र बहराइन दुबैका लागि सम्झौताहरूले इजरायली उच्च-टेक खरीद गर्ने सम्भावना पनि खोलेको छ। यसमा आइरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली जस्ता सैन्य टेक्नोलोजीका साथै अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य, पर्यटन र अधिकमा सहयोग पनि छ।
राजनीतिक रूपमा, यो युएई र बहराइनको लागि पनि एक जित्ने अवस्था हो। या त ट्रम्पले नोभेम्बरमा दोस्रो कार्यकाल जितेका छन र उनीहरुले पहिले नै उनको प्रशासन संग बिन्दुहरु बनाइसकेका छन्, वा बिडेन प्रशासनले उनीहरु लाई ग्रहण गरेका छन् र उनीहरु इजरायलको साथ सामान्यीकरण सम्बन्धी सम्झौताहरु हासिल गर्न कडा आधारमा छन्।
इजरायलको कुरा हो भने नेतान्याहूले एउटा ठूलो विदेश नीतिको उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छन्, जसमध्ये दुई अन्य इजरायली नेताहरू मात्र हासिल गर्न सकेका छन्। मेनचेम बिगिनले १९७९ मा इजिप्टसँग शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। यित्जक रबिनले १९९४ मा जोर्डनसँग शान्ति सन्धि गरे। नेतान्याहू एक दिनमा दुई देशका साथ सामान्यीकरण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन्।
महत्वपूर्ण रूपमा, ह्वाइट हाउस समारोह नेतन्याहूको घरेलु मुद्दाहरूबाट अलमल्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ । १८% बेरोजगारी, एउटा कोरोनाभाइरस संकट, जसले इजरायललाई दोस्रो सामान्य तालाबन्दीमा बाध्य पारेको छ र भ्रष्टाचारको आरोपमा आफ्नै परीक्षण। उसले बारम्बार आफ्नो निर्दोषताको घोषणा गरेको छ।
ट्रम्पको भूमिका के थियो र यो व्हाइट हाउसमा किन भइरहेको छ ?
ट्रम्प प्रशासनले मध्यपूर्वमा सर्ने अवसर देख्यो र यसको फाइदा उठायो। इजरायली प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा प्रगति गर्न असमर्थ, ट्रम्प र उनका सल्लाहकारहरूले ध्यान केन्द्रको बाँकी क्षेत्रमा सारे। ती दिनहरू बितिसकेका जब विवादले मध्य पूर्वमा समाचार चक्रलाई परिभाषित गर्‍यो। अब सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय लडाई एक तर्फ इरान र अर्कोतर्फ गल्फ सुन्नीको बीच हो। यो द्वन्द्वमा छ जहाँ ट्रम्पले इजरायललाई अरब राज्यहरूको नजिक धकेल्न खोजेका थिए।
दशकौंदेखि वाशिंगटन मध्य पूर्वमा शान्तिको प्रमुख दलाल र इजरायली-प्यालेस्टाइन वार्तामा महत्वपूर्ण मोडरेटर रहेको छ। यो राष्ट्रपति जिमी कार्टर थिए जो मेनाचेम बिगिन र अन्वर सदतको बीचमा थिए र बिल क्लिन्टन, यित्जक राविन र किंग हुसेनको बिचमा। अब यो ट्रम्प नेतान्याहू र युएई र बहरिनका विदेश मन्त्रीहरू बीच खडा हुनेछ।
तर अब यस क्षेत्रको ह्वाइट हाउसको दर्शनमा प्यालेस्तिनीहरूलाई सायद सामेल छैन। ट्रम्पले प्यालेस्तिनीहरूलाई वार्तालापको टेबुलमा आमन्त्रित गरेका छन् तर मध्यपूर्वको एउटा दर्शन अन्तर्गत मात्र इजरायलतर्फ र प्यालेस्तिनीहरूको बिरूद्धमा झेलिएको छ। यदि तिनीहरू संलग्न हुन चाहँदैनन् भने, उनीहरूलाई पछाडि छोड्दा उनीहरूलाई ह्वाइट हाउस खुशी लाग्दैन।
किन अहिले भइरहेको छ?
स्पष्ट गर्नका लागि, यी सम्झौताहरू अपरिहार्य देखिन्थे, चाहे तिनीहरू अहिले वा केहि बर्षहरूमा भएका छन्। ट्रम्प र नेतान्याहू उनीहरूलाई अब हुनको लागि धक्का दिए। घरेलु हिसाबले समस्याले ग्रस्त छ – र ट्रम्प चुनावमा दुई महिना भन्दा कम समय अघि चुनावमा टेलिफोन गर्दै थिए – त्यहाँ केही प्रमुख घटना घटाउने एक सर्वव्यापी धक्काको लागि साझा इच्छाशक्ति थियो। हालका हप्ताहरूमा कुसनर र विदेश सचिव माइक पोम्पीओले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरे र इजरायल र युएई बीचको सम्झौताको गतिलाई अघि बढाउन खोजेका थिए।
ती प्रयासहरू अझै सकिएका छैनन्। ओमानको खाडी राष्ट्रले इजरायल र बहरिनको बीचमा भएको सम्झौताको सराहना गर्दै इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउनको लागि अर्को पछाडि हुन सक्ने संकेत दिए। र साउदी अरेबिया? र इजरायल र साउदी अरेबियाबीच समान सम्झौताले यस क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने छ, तर छोटो अवधिमा यो असम्भव देखिन्छ।
प्यालेस्टाइन किन बेचिएको महसुस गर्छन्?
एक शब्दमा, प्यालेस्तिनीहरूले धोका दिएको महसुस गर्छन्। २००२ साउदीको नेतृत्वमा रहेको अरब पीस इनिसिएटिभले अरब राष्ट्रहरूले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउनु अघि इजरायली Palestinian प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वको अन्त्य गर्न आग्रह गरे। युएई र बहरेनले द्वन्द्वमा प्रगति नगरी सामान्यीकरणतर्फ अघि बढेको बखत कथा पल्टाइदियो। प्यालेस्टाइनहरूले युएई र बहरिनलाई यरूशलेम, अल-अक्सा मस्जिद र प्यालेस्तिनी कारणलाई धोका दिएको आरोप लगाए।
र किनभने यसलाई व्हाइट हाउसले धकेलेको छ, प्यालेस्टाइन नेताहरूले ट्रम्पको विरुद्ध गुनासोहरूको बढ्दो सूचीमा यो अर्को प्रवेश हो। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी दूतावासलाई यरूशलेममा लगे र अन्य इजरायल समर्थक कदम चालेपछि प्यालेस्टाइनहरूले ह्वाइट हाउससँगको सम्पर्क बिच्छेद गरे।
तर प्यालेस्टाइनहरूलाई उपलब्ध विकल्पहरूको सूची संकुचन हुँदैछ। प्यालेस्टाइनलाई इरान, टर्की र केही अन्यको समर्थन छ, तर यसको परम्परागत अरब साझेदारहरू इजरायलको नजीक बढ्दैछन्। त्यो आन्दोलनको संकेतको रूपमा, अरब लिगले प्यालेस्टाइनले समर्थन गरेको प्रस्ताव पारित गर्न असफल भयो जसले युएई-इजरायल सम्झौताको निन्दा गर्थे।
Previous articleसिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर ६ रिक्टर स्केलको भूकम्प : अपडेट
Next articleबिहीबारदेखि चन्द्रागिरि केवलकार सञ्चालनमा आउदै
अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिमा जो बाइडन निर्वाचित
जापानमा ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्पको धक्का
भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको निधन